အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ 75% Ethanol အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် FDA / CE / MSDS အသိအမှတ်ပြုခြင်းသင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများပင်လယ်၊ လေကြောင်း / မီးရထား / အမြန်ပို့ဆောင်နိုင်မှုစနစ်ရေဆေး / အမြန်ခြောက်သွေ့ခြင်း / နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေး / သတ်ခြင်း 99.99% ပိုးမွှားများ / ပAntိဇီဝဆေး / ပိုးသန့်ဆေး / သန့်ရှင်းရေးနှင့်စောင့်ရှောက်မှု,စသည်တို့. ရွေးချယ်ထားသောသက်တမ်းအတွက် 50ml / 100ml / 150ml / 250ml / 300ml / 500ml အရွယ်အစား2နှစ်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်သည် Accept ထုတ်ကုန်၏အင်္ဂါရပ်နှင့်လက်ဖြင့်ပြန်လည်သန့်ရှင်းဆေးရည်ကိုပန့်နှင့်အတူ 500ml လက်သန့်ရှင်းဆေးပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မှုကိုအသုံးပြုသည်,အရာ squeese ရန်လွယ်ကူသည် ...
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ 75% Ethanol အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် FDA / CE / MSDS အသိအမှတ်ပြုခြင်းသင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများပင်လယ်၊ လေကြောင်း / မီးရထား / အမြန်ပို့ဆောင်နိုင်မှုစနစ်ရေဆေး / အမြန်ခြောက်သွေ့ခြင်း / နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေး / သတ်ခြင်း 99.99% ပိုးမွှားများ / ပAntိဇီဝဆေး / ပိုးသန့်ဆေး / သန့်ရှင်းရေးနှင့်စောင့်ရှောက်မှု,စသည်တို့. ရွေးချယ်ထားသောသက်တမ်းအတွက် 50ml / 100ml / 150ml / 250ml / 300ml / 500ml အရွယ်အစား2နှစ်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် Accept ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်နှင့်စုပ်စက်နှင့်အတူရေစိုစွတ်စေသောလက်သန့်စင်ဆေး 300ml အမြောက်အများလက်သန့်ရှင်းရေး၏လျှောက်လွှာ,အရာ squeese ရန်သင့်လျော်သော ...
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ 75% Ethanol အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် FDA / CE / MSDS အသိအမှတ်ပြုခြင်းသင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများပင်လယ်၊ လေကြောင်း / မီးရထား / အမြန်ပို့ဆောင်နိုင်မှုစနစ်ရေဆေး / အမြန်ခြောက်သွေ့ခြင်း / နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေး / သတ်ခြင်း 99.99% ပိုးမွှားများ / ပAntိဇီဝဆေး / ပိုးသန့်ဆေး / သန့်ရှင်းရေးနှင့်စောင့်ရှောက်မှု,စသည်တို့. ရွေးချယ်ထားသောသက်တမ်းအတွက် 50ml / 100ml / 150ml / 250ml / 300ml / 500ml အရွယ်အစား2နှစ်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် Accept ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်နှင့်စိတ်ချရသောလက်သန့်ရှင်းရေးဆေးအသုံးပြုခြင်း ၂၅၀ မီလီမီတာအရွယ်ရှိသန့်စင်ဆေးရည် ,အရာသည်အပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးစျေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ 75% Ethanol အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် FDA / CE / MSDS အသိအမှတ်ပြုခြင်းသင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများပင်လယ်၊ လေကြောင်း / မီးရထား / အမြန်ပို့ဆောင်နိုင်မှုစနစ်ရေဆေး / အမြန်ခြောက်သွေ့ခြင်း / နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေး / သတ်ခြင်း 99.99% ပိုးမွှားများ / ပAntိဇီဝဆေး / ပိုးသန့်ဆေး / သန့်ရှင်းရေးနှင့်စောင့်ရှောက်မှု,စသည်တို့. ရွေးချယ်ထားသောသက်တမ်းအတွက် 50ml / 100ml / 150ml / 250ml / 300ml / 500ml အရွယ်အစား2နှစ်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် Accept ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်နှင့်မြှင့်တင်ရေးလက်သန့်ရှင်းရေး၏လျှောက်လွှာ 150ml အရွယ်အစား antibacterial hand lotion sanitizer ,ဘယ်ဟာအများဆုံးထဲကတစ်ခုလဲ ...
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ 75% Ethanol အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် FDA / CE / MSDS အသိအမှတ်ပြုခြင်းသင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်းများပင်လယ်၊ လေကြောင်း / မီးရထား / အမြန်ပို့ဆောင်နိုင်မှုစနစ်ရေဆေး / အမြန်ခြောက်သွေ့ခြင်း / နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေး / သတ်ခြင်း 99.99% ပိုးမွှားများ / ပAntိဇီဝဆေး / ပိုးသန့်ဆေး / သန့်ရှင်းရေးနှင့်စောင့်ရှောက်မှု,စသည်တို့. ရွေးချယ်ထားသောသက်တမ်းအတွက် 50ml / 100ml / 150ml / 250ml / 300ml / 500ml အရွယ်အစား2နှစ်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် Accept ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်နှင့်သန့်စင်ဆေးလိမ်းဆေး၏ 100ml အိတ်ကပ်သန့်စင်ဆေးထည့်သည် ,ထွက်သွားသည့်အခါပေါ့ပါးပြီးအဆင်ပြေစွာသယ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာ
လက်ဆေးခြင်းကင်းသည့်လက်သန့်ရှင်းဆေးဂျယ် 50ml MSDS / CE / FDA အကောင်းဆုံးလက်သန့်ရှင်းဆေး
item ချစ်စရာလက်သန့်ရှင်းရေးလက် Gel ပင်မပါဝင်ပစ္စည်း 75% အရက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် FDA / CE / MSDS အသိအမှတ်ပြုခြင်းသဘောင်္တင်ခြင်းနည်းလမ်းများပင်လယ်၊ လေကြောင်း / မီးရထား / အမြန်ပို့ဆောင်နိုင်မှုစနစ်ရေဆေး / အမြန်ခြောက်သွေ့ခြင်း / နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေး / သတ်ခြင်း 99.99% ပိုးမွှား / ပAntိဇီဝဆေး,စသည်တို့. ရွေးချယ်ထားသောသက်တမ်းအတွက် 50ml / 100ml / 150ml / 250ml / 300ml / 500ml အရွယ်အစား2နှစ်ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ် Accept ကုန်ပစ္စည်း၏အသွင်အပြင်နှင့်သန့်ရှင်းရေးလက်အားအသုံးပြုခြင်း 50ml သေးငယ်သောလက်သန့်ရှင်းဆေးကိုသုံးပါ, အပြင်ကိုသွားပြီးထည့်ပါ